UJARRET STOLL UPHAKANYISIWE KU-ERIN ANDREWS KWIDISNEYLAND: IINKCUKACHA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UJarret Stoll Ocetyiswayo ku-Erin Andrews kwiDisneyland: Fumana Iinkcukacha zothando!
Ifoto ngoncedo luka-Erin Andrews
Ngu: Esther Lee 12/15/2016 ngo-2: 00 PM
Ayikho into eyodlula eyona ndawo imyoli emhlabeni! UJarret Stoll ecetywayo U-Erin Andrews KwiDisneyland, umdlali weHockey utyhile ngoLwesithathu, nge-14 kaDisemba.
Ukuhamba-kwisithuba se- kuyamangalisa, udliwanondlebe olutsha neqela lakhe langaphambili i-LA Kings-ityhile ngqo ukuba kwenzeka nini kwaye nini ixesha lomlingo. Imbaleki yabuza i Ukudanisa ngeenkwenkwezi Ukubambisana naye ukutshata naye ngaphakathi kweClub 33, iklabhu yabucala eDisneyland eNew Orleans Square. Esi sibini emva koko sibhiyozela ukuzibandakanya kwabo ngokubukela iziqhushumbisi ezibukekayo.
NgoLwesine, u-Andrews wathumela umyalezo ngefoto kwisindululo sika-Stoll-umfanekiso-ngqondweni wakhe woyama kwaye wamanga umyeni wakhe wexesha elizayo ngelixa ebhengeza iringi yakhe eqaqambileyo yedayimane. #TBT Ukuhlwa kwiveki ephelileyo ngomlingo e @Lukhanyo # Iklabhu33 @iqosweb , uye wabelana.
Ukudanisa kunye nomlingisi weqela elingu-Erin Andrews ubandakanyekile kumdlali we-NHL uJarret Stoll - jonga umsesane wakhe, nantsi! (Ifoto ngoncedo lweShutterstock.com)
Kamva ngobo busuku, intatheli ye-Fox Sports esecaleni yaveza ukuba wayezibandakanya nohlaziyo lweendaba zentlalo. U-Andrews uthumele ukubanjwa kwesimo sezulu eWisconsin ngaphambi komdlalo wePackers-Seahawks, ebhala: Le mozulu eLambeau izakubeka isampuli kumdlalo wam weringi.
Ngentsasa elandelayo, uAndrews ’ I-DWTS inkwenkwezi kunye nomlingane wangaphambili wokudanisa, UMaksim Chmerkovskiy , Uqinisekisile ukubandakanyeka kwakhe kudliwanondlebe lwaseFox lwasekhaya. Mhlawumbi ndizophula iindaba. Andiqinisekanga, umdanisi waqhula. Ukwaluhlobo, mhlawumbi waqhekeza iindaba zokuba sikhulelwe, ke mhlawumbi oko kukubuyisela inceba ngapha.
NgoMvulo, nge-12 ka-Disemba, u-Andrews wagqibela ngokwenza umsesane xa wayehamba kwisikhululo seenqwelomoya i-LAX nangona wayemathidala ukwabelana ngeenkcukacha.
Esi sibini saqala ukuthandana ngo-2012, saza sajongana nokuganga endleleni ngo-2015 xa uStoll wayehlawuliswa nge-cocaine eLas Vegas. Uye washiya Amakhosi kwaye ngoku uyiarhente yasimahla.
Abantu bayazenza iimpazamo. Ndenze impazamo kwaye andicingi ukuba kufanelekile ukubonakalisa ukuba ndingumntu onjani, njengomdlali, njengomlingane, njengomhlobo, uStoll, 34, uxelele Amakhosi kudliwanondlebe lwakhe olutsha. Ndiyazi ukuba ndingumntu onjani, kwaye wonke umntu ongqonge mna uyazi ukuba ndingumntu onjani. Ndibonisile iminyaka ukuba ndingumntu onjani emkhenkceni, ngaphandle komkhenkce, njengenxalenye yolu luntu kunye nalo mbutho, nabo bonke abantu abandingqongileyo, kunye nabo bonke abahlobo bam abandaziyo. Yayiyindlela elusizi ukushiya umbutho, kodwa uyafunda kwiimpazamo nakwinkxwaleko kwaye ubangcono njengomntu.
Izibhambathiso zomtshato kwimizekelo yakhe
ukuhombisa ulwamkelo lomtshato
Ukuhamba ngezinyuko okwangoku
zithatha ixesha elingakanani iifoto zomtshato
indlela yokuxelela idayimane yinyani